मंगलवार मिलान | स्लट Fruity £5+ £ 500 मुफ्त! मंगलवार मिलान | स्लट Fruity £5+ £ 500 मुफ्त!
Min Dep £20, Max Bonus 600 bonus spins, 1सेन्ट,8ध,15ध,22एन,29ध अगस्ट, Max 30 जम्मा, Cleopatra only, 6-10px,30एक्स wagering, 4x Cap. Full T&Cs apply
स्लट Fruity क्यासिनो आफ्नो दरवाजे खुसी घण्टाको मंगलबार आफ्नो अनलाइन क्यासिनो मा क्लियोपेट्रा स्लट प्ले ठूलो जीत एक अद्भुत मौका दिन्छ. आनन्दित घण्टा देखि सुरु 18.00 गर्न 22.00 BST. त्यहाँ एउटा 20 निःशुल्क spins अगस्ट को महिनाको समयमा प्रत्येक मङ्गलबार £ 20 को पहिलो जम्मा मा प्रस्ताव. तर सम्झना, तपाईं एक समय मा केवल एक बोनस खेल्न योग्य छन्.
यो मंगलवार मिलान पदोन्नति प्रस्ताव पनि कुनै पनि तरल पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ अघि भेट गर्न भनेर केही wagering आवश्यकताहरु आउँछ. तपाईं कुनै पनि रकम वापस अघि क्यासिनो प्रस्ताव केही स्लट मा बोनस को 30x खर्च गर्न. तपाईंले यी आवश्यकताहरू बैठक अघि धन फिर्ता भने, तपाईं आफ्नो सबै जीत बोनस गुमाउन प्राप्त. मा नगद गर्न कुनै पनि मामला जितको रकम 4x भन्दा तपाईं अधिक रूपान्तरण गर्न सक्दैन. यदि wagering विनिर्देशों को समयमा भेट छैन7दिन, यस क्यासिनो तपाईंको खाता मा बोनस nullify गर्ने अधिकार धारण. यो मंगलवार मिलान पदोन्नति मुक्त spins लिन3विजेता पछि आफ्नो खातामा प्रतिबिम्बित गर्न दिन. मात्र मान्य खातावालहरूले वृद्ध 18 र माथिको फाइदा लिन सक्छ मंगलवार मिलान पदोन्नति प्रस्ताव.
सर्तहरू र TUESDAY मिल्ने
नियम र विश्व भ्रमणमा को स्थितिहरु